भारतीय जनता पार्टीका नेतालाई गगन थापाको पत्र, के छ पत्रमा ? – eSidhakura
मुख्य पृष्ठराजनीतिभारतीय जनता पार्टीका नेतालाई गगन थापाको पत्र, के छ पत्रमा ?
काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सांसद् एवं पूर्वमन्त्री गगन थापाले भारतीय जनता पार्टीका नेता स्वराज कौशललाई एक पत्र पठाएकाे बताउनुभएकाे छ । हालै मात्र नेपालले लिम्पियाधुरा, कालापानीसहित भूभाग समेटेर नयाँ नक्सा साैवजिक गरेपछि यसले भारतीय मिडियादेखि राजनीतिक वृत्तमा हलचल ल्याएकाे छ । यसै सन्दर्भमा बलिउड अभिनेत्री मनिषा कोइराला सीमा विवादमा नेपालकाे पक्षमा एक ट्विट गरेपछि भाजपा नेता कौशलले आफ्नी छोरी भए पनि नेपालको नक्साबारे गलत धारणा रहेको बताएका थिए, साेकाे खण्डनमा गगन थापाले उनलाई पत्र पठाउनुभएकाे हाे ।
के छ थापाले लेखेकाे पत्रमा ? (उहाँकै शब्दमा)-मैले मनिषा कोइरालाको ट्विटमा तपाईंको प्रतिक्रिया पढ्ने मौका पाएँ। त्यसमा तपाईंले तपाईंको परिवार र स्वर्गीय बिपी कोइराला र कोइराला परिवारसँगको प्रगाढ सम्बन्धको बारेमा चर्चा गर्नुभएको छ। यो पढिरहँदा मैले पनि संसदको प्रतिनिधी सभामा स्वर्गीय शुस्मा स्वराजसँग भएको वार्तालाप सम्झिएँ। त्यसबेला उहाँले पनि कोइराला परिवार र आफ्नो परिवारको प्रगाढ सम्बन्धको चर्चा बारेमा गर्नुभएको थियो। तपाईंको ट्विट पढिरहँदा मलाई यस्तो लाग्यो कि मनिषा कोइरालाको ट्विटमा तपाईंको सबैभन्दा ठूलो चित्त दुखाइको विषय भारत र नेपालको सीमा विवादमा चीनलाई किन ल्याइयो भन्ने रहेछ।
तपाईंको दृष्टिकोणमा यो विषय उत्तेजक र अर्थहीन रहेछ। मलाई यो भनिरहँदा नराम्रो लागेको छ कि सीमा विवादका क्रममा नेपालको राजनीतिक विकासका सन्दर्भमा तपाईंको भनाइ त्रुटीपूर्णजस्तो देखिन आयो। यसमा विषयमा चीनलाई समावेश गर्नु कुनै नौलो कुरा होइन। यही सन् २०२० मे १३ मा नेपाली कांग्रेसका सम्माननीय सभापति शेरबहादुर देउवाले खुलेआम रूपमा भन्नुभएको छ‚ ‘सुगौली सन्धीका अनुसार पूर्वदेखि महाकाली नदी लिपुलेक‚ लिम्पियाधुरा र कालापानी नेपालसँग सम्बन्धित छ। त्यसैले भारतीय सेना त्यहाँबाट हट्नुपर्छ र नेपालले फेरि त्यो क्षेत्रलाई आफ्नो नियन्त्रणमा लिनुपर्छ।’
मलाई अझै सम्झना छ‚ नेपाली कांग्रेसका सभापति तथा तत्कालीन प्रधानमन्त्री स्वर्गीय सुशील कोइरालाले लिपुलेक क्षेत्रको विषयमा चीन र भारतबीच भएको सम्झौताको विरोध गर्दै एक पत्र पठाउनुभएको थियो। जुन सम्झौता नेपालकै अनुपस्थितिमा नेपाली भूमीको प्रयोग गर्ने सन्दर्भमा आधारित थियो। भारतले भरखरै उद्घाटन गरेको सडक पनि त्यही सम्झौताको उपज हो भनेर हामीले बुझ्न जरूरी छ। त्यसैले नेपालका लागि यो विषयमा लिम्पियाधुरा‚ लिपुलेक र कालापानी नेपालकै क्षेत्र हो भन्ने बुझाउनका लागि पनि दुवै देशसँग संवाद गर्नु जरूरी हुन्छ।
नेपालको कुनै पनि भूभाग मिचिनु भनेको हामी सबैका लागि अस्वीकार्य विषय हो‚ त्यसैले नेपाली कांग्रेसले सरकारको यो कदमको खुलेर समर्थन गरेको छ। त्यसैले मनिषाको अभिव्यक्ति कुनै पनि हिसाबले आपत्तिजनक छैन।कृपया चीनले नेपाललाई प्रयोग गरिरहेको छ भन्ने भ्रमबाट बाहिर आउनुहोला। नेपालले धेरै लामो समयदेखि भारतसँग विवादित क्षेत्रको विषयमा संवादको माध्यमबाट समस्या समाधान गर्ने प्रयास गरिरहेको छ ।तर यो विषयमा भारतले सधैं यो विषयलाई बिलम्बमात्र गरिरहेको छ र हामी त्यो संवादको लागि पर्खिरहेका छौं। भारतले ‘इपिजी’को रिपोर्ट लिन पनि मानेको छैन।
सन् २०१९ नोभेम्बर २ मा भारतले आफ्नो राजनीतिक नक्सामा नेपालको क्षेत्रलाई पनि समेटेर प्रकाशित गरेपछि नेपालले यसको खुलेर विरोध गर्‍यो। यी विरोधका बावजुद पनि भारतले संवादका माध्यमबाट समस्या समाधान गर्नेतर्फ ध्यान नै नदिई नेपालको क्षेत्रमा सडक निर्माण गर्न थाल्यो। नेपालको संसद‚ राजनीतिक दल र सरकारको सर्वपक्षीय सहमतिमा हामीले पनि हाम्रो क्षेत्र लिपुलेक‚ लिम्पियाधुरा र कालापानी समेटेर नेपालको राजनीतिक नक्सा सार्वजनिक गर्नुपर्छ भनी निर्णय गर्‍यौं। कतिपय विषयमा अहिलेको सरकारसँग हाम्रो पनि विमति छ।
तर यस विषयमा नेपाल सरकारको कदमप्रति नेपालका सबै पार्टीको ऐक्यबद्धता रहेको छ। यो विषयमा नेपाली जनताले सत्यको अगाडि जस्तो परिस्थिति आए पनि सामना गर्नुपर्छ भनेर पूर्ण समर्थन जनाउनु भएको छ। यसको समाधानको एकमात्र उपाय भनेको भारत र नेपालबीचको द्वीपक्षीय वार्ता नै हो‚ यदि परिआएमा तेस्रो पक्षको पनि आवश्यकता पर्न सक्छ। आशा गर्छु कि भारतले यी दुई राष्ट्रको मित्रता र पारस्परिक सम्बन्ध र समानताको विषयलाई आत्मसाथ गर्नेछ। कोही पनि सानो र ठूलो भन्ने छैन। गगन थापा एमपी
जिल्लाभित्र सवारी सञ्चालन गर्न दिइएको पास पनि खारेज गर्ने गृह मन्त्रालयको निर्णय
नेकपा सांसदहरूलाई काठमाडौं नछाड्न ह्विप
भारतीय सीमामा काँडेतार लगाउन माग
लिपुलेक अरु देशको भए भारतसँग यु’द्ध भइसक्थ्यो : भीम रावल
३५२०१ पटक पढिएको
११५१७ पटक पढिएको
११४६७ पटक पढिएको
१०६३१ पटक पढिएको
९७४३ पटक पढिएको